Mahad Salaad oo raalli-galin u diray Dowlad Carbeed | KEYDMEDIA ONLINE
Mahad Salaad oo raalli-galin u diray Dowlad Carbeed
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa Dowladda Imaaraatka Carabta ka raalli galiyay war saaka ka soo baxay Dowladda Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Mahad Salaad ayaa hadalkii Wasiirka Warfaafinta Cismaan Dubbe ku tilmaamay mid ka soo yeeray dockayeer iyo dabadhilif dallaal u ah dowlado kale, waa siduu hadalka u dhigay.
Wuxuu sheegay inuu ka raalli galinayo Dowladaha uu hadalkaas ku wajahnaa, wuxuuna ugu baaqay in aysan ka niyad jabin walaalahooda Soomaaliyeed.
Mahad Salaad wuxuu sidoo kale sheegay in u jeedada Rajiimka waqtigiisu dhamaaday ay tahay in ay duugaan danbigii ay Jimcihii ka geysteen Magaalada Muqdisho.
Hoose ka aqriso qoraalka Xildhibaanka:-
“Raaligelin naga guddooma, dockayeer iyo dabadhilif dallaal u ah dowlado kalena yuusan idin niyadjebin!
Dadkii la laayay iyo dambiyadii dagaal ee Jimcihii Muqdisho ka dhacay laguma dabooli karo been iyo tororog Dubbe idaacadaha ka aqriyo. Waxaan mar kale ku celinaynaa in dambiileyaasha dagaal ee shacabka gumaaday shuruucda dalkana ku tuntay cadaalada si degdeg ah loo horkeeno.
Dowladaha Carabta walaalaha aan nahay ee loo gafay sharaftooda raaligelin ayaan ka siinaynaa aflagaadada, beenta iyo barobagaandada Farmaajo iyo kooxdiisa qaaqleyaasha ah soo dhoodhoobeen. Dadka Soomaaliyeed waa idiin ogsoonyihiin abaalka aad u gasheen iyo sidii gobonimada lahayd ee aad u soo garab istaagteen xiliyadii aadka u adkaa. Xasuus wanaagsan ayaanan idinkaga haynaa samaha aad noo gasheen. Waxaan idinka codsanaynaa in aysan idin niyadjebin dockayeer iyo dabadhilif dallaal u ah dowlado kale, dalkiisa iyo dadkiisana dambiyo dagaal ka galay”.